Siyakwamukela Ningbo J & S Botanics Inc., njengoba wasungulwa ngo-1996, besilokhu umphakeli ehamba phambili Herb Extracts, Bee Imikhiqizo Ukudla nezithasiselo eChina, imikhiqizo anesizotha evunywe isitifiketi Kosher kanye ECOCERT organic. J & S Botanics Isibhekwa njengoba Ningbo Agricultural Oholela Enterprise kusukela 2009.
J & S Botanics itholakala Beilun wesifunda, Ningbo edolobheni, kulula kakhulu kokubili ulwandle nezwe zokuthutha. imboni yethu futhi R & D Centre ukumboza 2.400 esingamahektare nge ukutshalwa $ 4.5 million.The ukufakwa izakhiwo kanye inqubo notshwala kuthiwa lilawulwa ngokuvumelana GMP ejwayelekile. okukhipha yethu yaminyaka yonke imifino akhiphe isesikhathini 1000MT, ubhekene imikhiqizo 100, thina kakhulu kwimikhiqizo ucwaningo olusha.
Ukuqinisekisa ukulungiselelwa for yokukhiqiza amasu nokugcina umsebenzi yemvelo imikhiqizo yethu, J & S Botanics baqashwe Doctor PARIDE ephuma e-Italiya, ohola i-abacwaningi iqembu uhlanganyela ekubuyekezeni amasu ngaso sonke isikhathi. Manje J & S Botanics uye ephethwe ezingaphezu kuka 7 patent futhi eziningana ubuchwepheshe ekhethekile emhlabeni ezingeni ehola. Lezi amasu eziphambili engasisiza ukuba silondoloze ukuzinza ukukhiqizwa, ngcono ukusebenza, asehlisele izindleko consequently ikhulisiwe izinzuzo amakhasimende ethu.
Cishe yonke imikhiqizo yethu kukhona emazweni angaphandle. izimakethe zethu eziyinhloko zihlanganisa amazwe Southeast Asia, yaseMpumalanga Ephakathi, eSpain, eJalimane, eFrance, eSwitzerland, Japan, USA, e-Australia, eNingizimu Afrika kanye endaweni Taiwan. Ithemba ukusungula eside esibonelweni nokubambisana nawe, uma une kokwenza uphenyo, sicela ukhululeke usazise.